Caddow Cali Gees oo si kulul u beeniyay warar saacadihii ugu dambeysay la hadal haayay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Caddow Cali Gees oo si kulul u beeniyay warar saacadihii ugu dambeysay la hadal haayay (AKHRISO)
War-saxaafadeed uu goordhaw soo saaray musharaxa madaxweyne C/laahi Cali Axmed oo loo yaqaano Caddow Cali Gees ayuu ku beeniyay inuu ka tanaasulayo tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Saacadihii ugu dambeysay waxaa si weyn loo hadal haayay in musharixiin uu ka mid yahay Caddow Cali Gees ay qorsheeynayaan inay ka tanaasulaan tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Caddow Cali Gees ayaa warkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid been abuur ah islamarkaana aan sal iyo raad toona laheyn, isagoona dhinaca kale tilmaamay inuusan jirin wax heshiis ah oo dhex maray isaga iyo musharax Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, xiriiro kala duwan aynu hore ula sameynay seddaxda musharixiin ee kala ah; Caddow Cali Gees, C/raxmaan Faroole iyo Bashiir Raage Shiiraar ayaa waxay gebi ahaan ku beeniyeen inay ka tanaasuli doonaan tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, Caddow Cali Gees ayaa waxay isku jufo yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka mid ah musharixiinta u tartameeyso xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana warar hoose aynu helnay ay sidoo kale sheegayaan in labadaasi musharax uu dhexmaray heshiis hoosaad ah.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka uu soo saaray Caddow Cali Gees